CircuPress: Email loogu talagalay WordPress waa Ugu dambeyntii Halkan! | Martech Zone
CircuPress: Email loogu talagalay WordPress ayaa ugu dambeyntii halkan ah!
Isniin, November 11, 2013 Talaado, Juun 17, 2014 Douglas Karr
Qiyaastii seddex sano ka hor, Adam Small iyo aniga waxaan fadhiyey maqaayadayada aan ka jeclaan jirnay wuxuuna ka sheegayey sida ay adag tahay in bixiyeyaasha adeegga iimaylku ula qabsadaan. Waxaan kasoo shaqeeyay ExactTarget oo ah la taliye is dhexgal markaa si buuxda ayaan ula socday caqabadaha. Adam iyo xaaskiisa ayaa aasaasay Suugada Wakiilada, Madal suuqgeyn suuqeed ah oo kobocday isla markaana dirtay tobanaan kun oo emayl asbuucii. Dhibaatadu waxay ahayd in bixiyeyaasha adeegga emaylka (ESPs) had iyo jeer ay umuuqdeen inay dhisayaan astaamaha isdhexgalka iyaga oo dalbanaya ama ka dib markii ay ka fekeraan adeegsigooda adeegsigooda.
Waxaan bilownay qodista iyo sameynta cilmi baaris waxaan ogaanay in ay jiraan dhowr bixiyeyaal emayl ah oo halkaas jooga, xitaa Amazon ayaa bilaabay mid, laakiin qiimaha iyo kakanaanta si fudud uma qalmin. Maaddaama suuq-geynta emaylku uu noqday mudnaanta adeegsadayaasha uu Adam lahaa, wuxuu aad ugu sii tiirsanaaday, qarash badan ku bixinayay, aadna u niyad jabsanayay. Marka wuxuu go aansaday inuu bilaabo dhisidiisa! Qiyaastii sanad kadib, barnaamijka Adam wuxuu dirayay MTA-kiisa (Wakiilka Wareejinta Boostada). Adam wuxuu dhistay maamulkiisa boodbood u gaar ah oo guji raadinta dusha sare sidoo kale! Soo dejintiisuna waxay la sinnayd dhammaan meelihii uu horay ula soo shaqeeyay.
Waqtigaas, waxaan bilownay fikirka sida aan uga faa'iideysan karno kaabayaasha dhaqaale ee uu ugu talagalay in loo isticmaalo si ka ballaaran. Iyadoo Martech ZoneKordhinta macmiilkeenna oo sii kordheysa illaa 100,000 macaamiil ah, waxaan xoogaa lacag ah ku bixin jirnay iibiye emailkeenna mana aanan faraxsanayn, sidoo kale. Waxay ahayd inaan maamulno laba nidaam, mid qorista nuxurka iyo mid maareeynta macaamiisha iyo nuxurka. Maxaan u wada kari weynay wax walba WordPress?
Waan kari karnay… iyo WordPress meel fog ayey ku soo mareen sannadahaas. Furaha fursadda waxay ahayd ku darista noocyada boostada ee caadiga ah. Noocyada boostada ee noo gaarka ah ayaa noo suurta geliyay sameynta nooc la yiraahdo email oo adeegso habka maareynta waxyaabaha ku jira iyo nidaamka templating si aad u dhisto emaylka. Adam wuxuu qaatay kaabayaashiisa oo hada loogu talagalay in lagu xajmi karo, waxaanan u aadnay inaan ka shaqeyno qalabka wax lagu dhejiyo! Marka, isticmaaluhu wuxuu u adeegsan karaa qalab-abuurka si uu u abuuro oo u maareeyo waxa ku jira, CircuPress-na wuxuu maareyn karaa dirista, la socoshada, maareynta soo kabashada, maareynta rukunka, iyo howlaha kale.
Tan iyo markii aan labadeenaba shaqooyin maalinle ah haynay, ayaa wixii ku soo kordhay ay saameyn ku yeelatay. Aadam wuu ka shaqeeyey, waanan ka shaqeeyey, Stephen ayaa dib u qoray, waanan tijaabinay, tijaabinay, tijaabinay oo tijaabinay aad iyo aad iyo aad u badan. Waxaan u gudbinay kumbuyuutarka WordPress usbuucii hore waxayna bixiyeen talooyin aad u fiican. Toddobaadkii hore, Adam wuxuu dib u qoray qaybo muhiim ah oo ka mid ah templating-ka waxaanan mar labaad gudbinay Jimcihii. Muddo dheer kuma qaadan ka hor intaanan helin warka aan rabno… WordPress waa la oggolaaday Wareeg Press. Waxaan aaminsanahay inaan nahay bixiyaha adeegga emailka keliya ee si gaar ah loogu dhisay WordPress!
Waxaan ku darnay astaamo aad u gaar ah. Qalabka wuxuu leeyahay qaab isku dhejisan ah widgets, shortcode iyo hawlaha. Fidinta waxay si otomaatig ah ugu daabacdaa emaylladaada bartaada - sidaas darteed aragtidaada internetka waxay ku habboon tahay boggaaga! E-mayllada maalinlaha ah iyo kuwa toddobaadlaha ah waa kuwo otomaatig ah oo baxa mar kasta oo aad haysato waxyaabo cusub. Muuqaal runtii aad u fiican ayaa ah in fiidiyowyada gundhigga ah lagu beddelay shaashado iyo badhamada ciyaarta sidaas darteed nuska macaamiisha emaylka ee aan ciyaarin sawirrada ayaa wali u oggolaanaya akhristaha inuu gujiyo fiidiyowga si uu u ciyaaro. Tilmaamo badan ayaa ku soo socda geeska taas!
Ma ka daashay khalkhal gelinta iibiyeyaasha emaylka qaaliga ah oo aad rabto inaad runti ka faa'iideysato waxyaabahaaga? Saxiix Wareeg Press maanta! Waxaan horeyba ugu badaleynaa macaamiisha kujira mareegtan CircuPress… hubi inaad iska qorto waxaadna arki doontaa sida ay u egyihiin.
Eeg Ololahaaga Email
U dir Email dalab
Samee Koontadaada iyo Diritaanka Jadwalka
Habee Xeerkaaga Template
Tags: emaylka loogu talagalay wordpressemail suuq geyn wordpresswarside loogu talagalay wordpressemaylka qoraalkawordpress plugin pluginwarsidaha wordpresswordpress plugin warsidewordpress macmiil plugin
Postano wuxuu abuuraa Xarunta Taliska Warbaahinta Bulshada
Nov 14, 2013 at 10: 43 AM
Hey Douglas, war wanaagsan! Mahadsanid, tani runti waxay u egtahay muuqaal cabsi leh waana hubaa inaan rukumo oo aan fiirin doono.
22, 2013 at 7: 21 PM
Hambalyo. Waxay umuuqataa mid aad iyo aad uqurux badan… Laakiin maxaa ku dhici doona saldhiggeyga dhabta ah ee AWeber? Miyaan u wareejin karaa bartaada?
By habka. Bogga hore ee CircuPress waxaa ku yaal bog bos ah oo cinwaankiisu yahay "CircuPress oo loogu magac daray Plugin Ganacsi Waa In Uu-leeyahay"! halkaasna waxaa ku qoran "WordPress waxaa loogu magac daray 6-da sare ee qasab ah in la helo WordPress plugins". Waxaan kuu hayaa inaad rabtay inaad dhahdo "CircuPress ayaa loo magacaabay…"
Nasiib wacan mashruucaaga!
22, 2013 at 8: 26 PM
Mahadsanid @guillermoziegler: disqus! Waxay kuxirantahay sida aad u isticmaaleyso AWeber. Haddii aad u isticmaaleyso AWeber inaad u soo dirto emaylkaaga maalinlaha ah ama toddobaadlaha ah, markaa haa - waad soo dejin kartaa macaamiishaada (5,000 emayl kasta). Waad ku mahadsantahay sixitaanka - Waan cusbooneysiiyay goobta!
23, 2013 at 12: 21 PM
Iyo su'aal kale… Ma cusbooneysiin karaa / hoos u dhigi karaa qorshaheyga markii loo baahdo?
23, 2013 at 12: 27 PM
Waxaan ka shaqeyneynaa biilka hadda - haa, gabi ahaanba!